अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति राजदूत नियुक्तिमा अनुमोदित – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति राजदूत नियुक्तिमा अनुमोदित
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार ०६:१७
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रकम हिनामिनाको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतमा नियुक्ति सदर गरेको छ । सरकारले २४ चैतमा परराष्ट्र सेवाका आठ र राजनीतिक नियुक्तिमा १२ गरी २० जनालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा प्राडा. रामस्वार्थ राय यादवलाई डेनमार्क र वासुदेव मिश्रलाई श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । उहाँहरू दुवैविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले सिफारिस गरेका नाममा संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ ।
डा. यादवमाथि धनुषा साइन्स क्याम्पसको सञ्चालक छँदा रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारमा अनुसन्धान जारी रहेकाले डा. यादव राजदूत नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि समितिले अख्तियारमा उहाँको मुद्दाबारे विस्तृत खुलाएर पठाउन पत्राचार गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अख्तियारले डा. यादवविरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसका बावजुद सुनुवाइ समितिले उहाँलाई राजदूत नियुक्त गर्न योग्य रहेको दाबी गर्दै उहाँको नियुक्ति सदर गरेको हो ।
बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित दुई राजदूत मिश्र र रायविरुद्ध परेको उजुरी औचित्यहीन भएकाले समितिले सर्वसम्मत राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । सभापति कर्णले भन्नुभयो, ‘हामीले लामो समयदेखि २० जना प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ गरिरहेका थियौँ । समितिले दिनरात नभनी काम गरेको छ । उजुरीको कारणले दुई जनाको अनुमोदन गर्न बाँकी थियो । उजुरी सम्बन्धमा हामीले गहन अनुसन्धान गरेर, पत्राचार गरेर, अध्ययन गरेर, आज त्यसमा विस्तृत रूपबाट छलफल गरेका छौँ । छलफल गर्दा उजुरीमा कुनै औचित्य नदेखिएकाले आयोगको पत्राचारबाट पनि हामीले आज डा. रामस्वार्थ राय र वासुदेव मिश्रलाई श्रीलंका र डेनमार्कको लागि प्रस्तावित राजदूतलाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेका छौँ ।’ उहाँले सरकारले प्रस्तावित दुई राजदूत मिश्र र रायविरुद्ध परेका उजुरीहरूको बारेमा गहन छलफल गरेर अनुमोदन गरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो आँकडामा डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ । र, वल्र्ड ह्यापिनेस इन्डेक्समा पनि डेनमार्क दोस्रो स्थानमा रहँदै आएको छ । सोही मुलुकमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेर सफाइ नपाएका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा एग्रिमो स्वीकृत भएर नआउने जोखिम देखिएको छ ।
यस्तै, श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत मिश्रमाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र बेलायतको पिआर रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । उहाँको उजुरीको पनि औचित्य नरहेको बताउँदै समितिले नियुक्ति सदर गरेको हो । जनकपुर स्थायी घर हुनुभएका प्राडा. यादवले भौतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । उहाँ जसपाको कोटाबाट राजदूतका लागि सिफारिस हुनुभएको हो । यस्तै, मिश्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालका बहिनी ज्वाइँ हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रको कोटाबाट राजदूत सिफारिसमा पर्नुभएको हो ।
मेरो कुरा अरुले नबुझेका हुन् कि
पर्यटक तान्न सोलेडाँडामा पूर्वाधार
उखु किसानको बक्यौता रकम उठाउँदै प्रतापपुर
लिची पाकेसँगै बढ्यो किसानको
भिमादका एक सय बढी
गठबन्धनविरुद्ध बोल्नेलाई पनि कारबाही
रनिल विक्रमासिंघे श्रीलंकाका नयाँ